Dhowr Qodob oo horyaala Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud – GOBOLADA.COM
Dhowr Qodob oo horyaala Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
May 16, 2022 May 16, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Dhowr Qodob oo horyaala Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
Xasan Sheekh ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyada Soomaaliya isagoo wareeggii seddaaxd uguna dambeeyay uga adkaaday madaxweynaha xilka haya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Xasan Sheekh ayaa helay 214 cod halka Farmaajona uu helay 110 cod. Waxaa codeysay 327 xildhibana ee labada aqal ee baarlamaanka.
Xasan Sheekh kuma cusba Villa Soomaaliya, waxaan sidoo kale ku cusbeyn caqabadaha horyaalla oo ah kuwa taagnaa intii uu madaxweynaha ahaa dhwor sano ka hor. Haddaba waxaan dib u eegeynaa qaar ka mid ah caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub.
Qeybo badan oo kamid ah deegaannada dalka waxaa gacanta ku haya ururka Al Shabaab, mar kasta waxaa dhawaaca weeraro iyo qaraxyo ay geystaan Shabaab. dalka waxaa ku sugan ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS kuwaas oo ilaaliya goobaha muhiimka ee dowladda, sida Tendhaha Afisyoone oo ay doorashada ka dhacday.
Madaxweynaha cusub waxaa horyaalla caqabaddan, waxaana laga doonayo in uu wax ka qabto amni darrada ka jirta dalka.
Dalalka beesha caalamka waxay dowladda Soomaaliya ka taakuleysa dib u dhiska iyo qalabeynta ciidamada Soomaaliya.
Britain ayaa magaalada Baybdho ka bilowday barnaamij ay ku tababareyso ciidammada qaranka Soomaaliya.
Maraykanka wuxuu tababarayaa oo uu qalabaynayaa ciidmada Danab halka Turkiga uu isagana wado tababaridda sarakiisha ciidanka soomaliya.
Madaxweynahan cusub waxaa hor taalla shaqadan si loo helo ciidamo qaran oo si buuxda ula wareego gacan ku heynta amniga Soomaaliya, taasoo waddada u xaarta in hawolgalka ATMIS la soo gabgabeeya.
Wuxuu qorshaha ahaa in waxa ka dambeeya doorashada 2020-ka in Soomaaliya ay ku tallaabsato doorasho qof iyo cod ah, qorshahaas oo aan ilaa hadda suurtagelin maadama dalka ay ka jirto xaalad amni darro ah iyadoo adkaatay in la diiwaangeliyo codbixiyeyaasha xilli dhinacyada siyaasadda ay su’aal geliyeen suurtagalnimada arrintaas.
Madaxweynahan cusub ayaa laga sugayaa sidii Soomaaliya ay doorashada soo socota looga hirgelin lahaa doorasho qof iyo cod ah.
Doorashadan waxaa xildhibaanada baarlamaanka soo doortay ergooyinka ku sugan deegaan doorashooyinka dalka kuwaas oo soo doortay madaxweynaha.
Soomaaliya waxa haatan lagu xukumaa Dastuur ku meel gaar ah, oo la ansixiyay 1-dii August, 2012-kii.
Ansixinta Dastuurka oo tan iyo xilligaas ay howsheeda soo jiitameysay ayey isu gudbiyeen baarlamaannadii dalka, walina lama soo saarin dastuur dhammeystiran.
Iyadoo Soomaaliya uu harreeyay khilaaf doorasho ayaa waxay dhinacyada isku hayay siyaasadda Soomaaliya ay isku khilaafsanaayeen hanaankii loo mari lahaa arrintaas.
Madaxweynaha haatan la doortay ayaa laga sugaya in uu dardargeliyo dadaallada lagu dhameystirayo dastuurka qeybyada ah si looga gudbo caqabaddan in muddo ah soo jiitameysay.
Qodobka 63-aad iyo qodobka 71-aad ee dastuurka ku meel-gaarka ah ayaa baarlamaanka awood u siinaya iney iyaga qabtaan howshaas, waxaana iska leh baarlamaanka federaalka.
Howlaha ugu dambeeya ee dhammeystirka Dastuurka waxaa qeyb ka ah in madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay heshiis ka gaaraan si la isugu waafaqo dastuurka kama dambeysta ah ee dalka uu sida tooska ah u qaadanayo.
Madaxweynahan cusub ee Soomaaliya waxaa laga doonayaa in uu isku keeno dhinacyada ay kala geysay siyaaasadda oo ay kamid yihiin madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe.
Sanadihii ugu dambeeyay abaaro ba’an ayaa waxay saameeyeen qeyba badan oo ka mid ah Soomaaliya.
Abaarahaasi ayaa sameeyay dad iyo dunyaba, hay’adaha gargaarka ayaa ku baaqay in si deg deg ah loogu gurmado shacabka dhibaateysan, Waxay sheegeen in malaayiin qof ay u baahan yihiin cuno gargaar ah.
Madaxweynaha cusub ayaa sidoo kale looga fadhiyaa inuu wax ka qabto abaaraha dalka ka taagn, kuwaas horseedaya in malaayiin qof ay wajahaan macaluul, iyadoo halista ugu badan ay la kulmayaan carruurta yaryar.
Musuq maasuqa ayaa weli dhibaata ku haya Soomaaliya xilli Soomaaliya ay kaalinta 178-aad ka gashay 180-ka waddan ee ku jira liiska dalalka uu sida xun u saameeyay musuqa, sida ku xusan warbixin ay soo saartay hay’adda Transparency International.
La dagaalanka musuqmaasuqa waxa uu markasta qeyb ka yahay qorshaha dowlad kasta oo timaado balse madaxweynahan cusub ayaa looga baahan yahay in uu la yimaado qorsheyeyaal lagu la dagaallamayo musuqmaasuqa.
Madaxda Dawlad Goboleedyada oo Hambalyo u diray Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya
Duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo Furmay
Maxay ka wada hadleen Gudoomiyaha Aqalka sare iyo Danjiraha Sacuudiga ugu qaabilsan Soomaaliya ?
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo magacaabay Wasiiro Cusub